I-Visa yaseIndiya yabemi baseCanada | Izidingo ze-eVisa ezivela eCanada
I-Visa yaseIndiya yabemi baseCanada
Iimfuno ze-eVisa zivela eCanada
India eVisa evela eCanada
Abemi baseCanada banako Faka isicelo se-eVisa India
ICanada yaba lilungu lokwazisa ngenkqubo ye-India eVisa
Abemi baseCanada bayakonwabela ukungena ngokukhawuleza besebenzisa inkqubo ye-India eVisa
Ezinye iimfuno ze-ETA
Abemi baseCanada bangafaka isicelo seIndiya eVisa kwi-Intanethi
I-eVisa yaseIndiya isebenza ngokufika ngenqanawa ngenqanawa
I-Visa yabakhenkethi yaseIndiya iyafumaneka kwinyanga enye, unyaka omnye okanye iminyaka emi-1
I-Visa yeIndiya yeShishini isemthethweni iinyanga ezili-12
I-Visa yaseIndiya ngeenjongo zonyango inokusetyenziswa kwakhona kwi-Intanethi
IVisa yaseIndiya iyafumaneka kubemi baseCanada / abanini ipasipoti ngombane ifomu yokufaka isicelo ukusukela ngo-2014 ukusukela kwi URhulumente waseIndiya. Le visa eya eIndiya ivumela abahambi abavela eCanada kwaye kwamanye amazwe Ukutyelela i-India ukuhlala ixesha elifutshane Oku kuhlala ixesha elifutshane kuhleli phakathi kwe-30, 90 kunye ne-180 yeentsuku kutyelelo ngalunye kuxhomekeke kwinjongo yotyelelo. Zintlanu iindidi eziphambili ze-Visa yaseIndiya (India eVisa) efumanekayo kubemi baseCanada. Amanqanaba afumanekayo kubemi baseCanada ukuba batyelele eIndiya phantsi komgaqo we-elektroniki i-India Visa okanye i-eVisa India yimigaqo yezoKhenketho, uTyelelo ngezoShishino okanye uKhenketho lwezoNyango (zombini njengesigulana okanye njengomlindi / umongikazi kwisigulana) ukutyelela i-India.
Abemi baseCanada abatyelele eIndiya ukuzonwabisa / ukubona indawo / ukudibana kwabahlobo / izihlobo / inkqubo yethutyana ye yoga / izifundo ezifutshane zexesha elingaphantsi kweenyanga ezi-6 ngoku banokufaka isicelo seVisa ye-Indiya ye-elektroniki ngeenjongo zokhenketho ezaziwa njenge-eTourist Visa enenye inyanga (ukungena kabini), unyaka o-1 okanye iminyaka emi-1 yokuqinisekisa (amangenelo amaninzi eIndiya phantsi kwexesha ezimbini zevisa).
Abemi baseCanada bangafaka isicelo se-Visa yase-Indiya ye-elektroniki (India eVisa) ekwi-intanethi kule webhusayithi kwaye banokufumana i-eVisa eya e-India nge-imeyile. Inkqubo yenziwe lula kakhulu kubemi baseCanada. Into efunekayo kukuba ube ne-imeyile ye-imeyile, ikhadi letyala / leDefault kwelinye lezemali ezili-133 okanye Paypal. I-Visa yaseIndiya ye-elektroniki (i-India eVisa) luxwebhu olusemthethweni oluvumela ukungena nokuhamba ngaphakathi eIndiya.
Abemi baseCanada bayakufumana i-eVisa yabo nge-imeyile, emva kokuba beyigcwalisile ifom yesicelo ekwi-intanethi ngolwazi olufunekayo kunye nokuhlawulwa kwekhadi letyala kwi-Intanethi.
Abemi baseCanada baya kuthunyelwa kwikhonkco kwidilesi ye-imeyile yayo nayiphi na amaxwebhu afunekayo ukuxhasa usetyenziso lwazo njengefoto yobuso okanye iphepha ledatha yepasi, ezi zinokukhuphelwa kule webhusayithi okanye zithunyelwe nge-imeyile kwidilesi ye-imeyile yeNkxaso yoMthengi.
Yintoni ekufuneka yenziwe ngabemi baseCanada ukufaka isicelo seVisa ye-Indiya eIndiya (India eVisa)
Imfuneko yabemi baseUnited States kufuneka babe noku kulandelayo malunga ne-India eVisa:
Ikhadi letyala / iDebit Card okanye iakhawunti yePaypal
Ipaspoti yesiqhelo esebenzayo iinyanga ezi-6
Kuthatha ixesha elingakanani kubemi baseCanada ukuba bagcwalise ifom ye-Intanethi
Ifom ye-Intanethi yenziwe lula, ithatha imizuzu emi-1-2 yokugcwalisa ifom ye-Intanethi yeVisa yaseIndiya (India eVisa). Nje ukuba intlawulo yenziwe, iinkcukacha ezongeziweyo eziceliweyo kuxhomekeka kuhlobo lwe-Visa ezinokubonelelwa nge-imeyile okanye zilayishwe kamva nazo ziya kuthatha phakathi kwemizuzu emi-2 ukuyigqiba.
Abemi baseCanada banokulindela kwangoko kangakanani ukufumana i-Visa yase-Indiya ye-elektroniki (eVisa India)
I-elektroniki India Visa ifumaneka ngeentsuku ezi-3 zokuqala zeshishini. Kwiimeko ezithile ukuqhutywa okungxamisekileyo kunokuzama. Kucetyiswa ukufaka isicelo IVisa yaseIndiya ubuncinci kwiintsuku ezine ngaphambi kohambo lwakho.
Nje ukuba i-Visa yase-India Visa (eVisa India) ifakwe nge-imeyile, ingagcinwa kwifowuni yakho okanye iprintwe ephepheni kwaye iphathwe ngokwakho ukuya kwisikhululo seenqwelomoya. Akukho sidingo sokutyelela kwindlu yozakuzo okanye ummeli waseIndiya.
Zeziphi izibuko abanokufika kuzo abantu baseCanada kwi-elektroniki i-India Visa (eVisa India)
I-elektroniki India Visa ifumaneka ngeentsuku ezi-3 zokuqala zeshishini. Kwiimeko ezithile ukuqhutywa okungxamisekileyo kunokuzama. Kucetyiswa ukuba apply online ubuncinci kwiintsuku ezine ngaphambi kohambo lwakho.
Yintoni ekufuneka yenziwe ngabemi baseCanada emva kokufumana kwiVisa ye-elektroniki e-India nge-imeyile (eVisa India)
Nje ukuba iVisa ye-elektroniki yaseIndiya (eVisa India) ithunyelwe nge-imeyile, ingagcinwa kwifowuni yakho okanye iprintwe ephepheni kwaye iphathwe ngokwakho ukuya kwisikhululo seenqwelomoya. Akukho sidingo sokutyelela kwindlu yozakuzo okanye ummeli waseIndiya.
Ijongeka njani i-Visa yaseIndiya kubemi baseCanada?
Ngaba abantwana bam bafuna iVisa ye-elektroniki yaseIndiya? Ngaba likho iqela leVisa laseIndiya?
Ewe, bonke abantu bafuna i-Visa yase-India kungakhathalekile iminyaka yabo ukubandakanya iintsana ezizelwe zineepasipoti zabo ezahlukileyo. Akukho ngqondo yosapho okanye yeqela iVisa laseIndiya, umntu ngamnye kufuneka enze isicelo sokwabo Isicelo seIndiya Visa.
Abemi baseCanada kufuneka benze nini isicelo seVisa ukuya eIndiya?
I-eVisa yase-India (Visa ye-Elektroniki ukuya eIndiya) inokufakwa nangaliphi na ixesha elide njengoko uhambo lwakho luphakathi kunyaka olandelayo.
Ngaba abemi baseKhanada bayayidinga iVisa yaseIndiya (eVisa India) ukuba iza ngenqanawa yokuhamba ngenqanawa?
E-India India i-Visa iyafuneka ukuba iza ngenqanawa yokuhamba ngenqanawa. Ukuza kuthi ga namhlanje, nangona kunjalo, i-eVisa India ivumelekile kwezi zikhumsha zolwandle ukuba zifika ngenqanawa yokuhamba ngenqanawa:
Izinto ezili-11 ezenziwayo kunye neendawo ezinomdla kubemi baseCanada
Ukutya okwenziwe apha ekhaya, iChikmagalur
I-Western Ghats yokunyuka intaba Coorg
Ukujonga ukuhamba ngeentaka Madikeri
Ukunyuka kweNtaba, iChikmagalur
Hlawula ukuthobela kwitempile yase-Akshardham
Fumana uxolo lwangaphakathi kwitempile yeLotus
Amava enkcubeko eyahlukileyo eJama Masjid
Ukuhamba ngesikhephe eOld Fort
Embassy yaseCanada eNew Delhi
I-7/8 iShantipath, iChanakyapuri 110 021 eNew Delhi eIndiya
Cofa apha ukuze ubone apha uluhlu olupheleleyo lweSikhululo seenqwelomoya, iSeport kunye neendawo zokujonga abafudukayo ezivunyelwe ukuba ziphume kwi-eVisa India (ngombane we-India Visa).